Simon Kjaer iyo kooxda caafimaadka xulka Denmark ee badbaadiyay nolosha Christian Eriksen oo la guddoonsiiyay bilad uu bixiyo xiriirka UEFA oo sanadle ah – Gool FM
(Copenhagen) 25 Agoosto 2021. Kabtanka xulka qaranka Denmark ee Simon Kjaer iyo shaqaalihii caafimaad ee sida wada-jirka u badbaadiyay nolosha xiddiga Inter Milan ee Christian Eriksen ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta sanadka ee Uefa President’s Award.
Kjaer ayaa kaalin hoggaamineed ka geystay badbaadada xiddiga ay xulka Denmark ka wada tirsan yihiin ee Eriksen kaddib markii uu xiddiga khadka dhexe ka ciyaara istaagay wadnaha isla markaasna uu joogga ka dhacay gabagabadii qaybtii hore ee ciyaartii u dhexeysay Denmark iyo Finald ee ka tirsaneyd tartankii qarramadda Yurub ee UERO 2020.
Difaaca AC Milan ayaa durba usoo orday dhanka Eriksen isagoo deg deg ugu yeeray shaqaalaha caafimaadka, waxa uu sidoo kale u agaasimay xiddigaha xulkiisa inay isku gadaamaan Eriksen si aysan xaaladdiisa u argagax gelin daawadayaasha.
Waxaa intaas dheer in 32-sano jirkan uu laab-qaboojis iyo inuu xasiliyo ugu dhaqaaqay xaaska saaxiibkiis taasoo uu sidoo kale ku helay ammaan badan.
Dhinaca kale, kulankan oo ka dhacay magaalada Copenhagen ee isla dalka Denmark 12-kii June ee sanadkan ayaa waxaa sidoo kale kaalin mug leh ka qaatay waaxda caafimaadka garoonka oo si deg deg ah ugu xiray xiddigan qalabka dhaqaajiya wadnaha ee ICD (implantable cardioverter defibrillator).
Si kastaba ha ahaatee, xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa abaalmarinta sanadlaha ah ee Uefa President’s Award guddoonsiiyay Kabtanka Denmark iyo shaqaalaha caafimaadka ee xulkaas kaddib kaalintii micnaha balaarneyd ee ay ka geysteen badbaadada Christian Eriksen.
Mareykanka oo hay'adda FIFA Foundation gaarsiiyay lacag faro badan oo uu kaga ceyminayo musuq-maasuq lagu kala kacay xiriika kubadda cagta dunida ee FIFA iyo qaar ka mid ah xiriirrada hoos taga
Real Madrid oo dalabkii ugu horreeyay ee rasmi ah ka gudbisay xiddiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe... (Waa immisa lacagta ay Los Blancos u bandhigtay PSG?)